Tusaalooyinka moodada si ay kuu dhiirigeliyaan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Tusaalooyinka moodboard-ka si ay kuu dhiirigeliyaan
Iris Gamen | 04/04/2022 22:00 | Dhiirrigelinta
Mashruuc kasta oo hal-abuur leh oo aad gacantaada ku hayso waa in ay maraan habka abuurista moodboard-ka. Si aad u hesho qaab muuqaal ah oo gaar ah oo isku xiran, fulinta guddiga niyadda ayaa ah mid ka mid ah wejiyada ugu adag, laakiin sidoo kale waa qaybta ay ku jiraan walxaha kala sooci doona hal calaamad oo kale.
Qoraalkan, waxaan rabnaa inaan kaala hadalno arrintan farsamada hal-abuurka ah, taas oo noo horseedaysa inaan horumarino caalamka muuqaal ah iyada oo loo marayo tixraacyo iyo sidoo kale, waxaan ku tusi doonaa tusaalayaal moodboard, si aad si muuqaal ah u fahanto waxa aan ka hadlayno.
looxyada niyadda, Caadi ahaan waxay ka samaysan yihiin sawiro, midabyo, textures, far, gooyn, iwm., Tixraacyo tixraacyo nagu dhiirigeliya oo ku dhex jira kanaalka qiyamka aan rabno inaan gudbinno.
1 Maxaa u wanaagsan isticmaalka moodboard-ka?
2 Tusaalooyinka Guddiga niyadda ugu Fiican
2.1 guddiga niyadda design gudaha
2.2 Moodhka moodada
2.3 Moodboard ee xayeysiinta iyo naqshadeynta
3 Qalabka dhijitaalka ah si loo sameeyo guddi niyadda
Maxaa u wanaagsan isticmaalka moodboard-ka?
Ma aha oo kaliya in farsamadan loo isticmaalo aduunka naqshadeynta, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa naqshadeynta gudaha, abaabulida dhacdo, ururinta moodada, caleemaha sawirada, iwm. Marka la soo koobo, gudaha mashruuc kasta oo leh muuqaal muuqaal ah.
Waa qalab muhiim ah oo ku jira hababka hal-abuurka ah, waa farsamo aad waxtar u leh, tan iyo Iyada oo loo marayo, aasaaska aqoonsiga muuqaalka ah ee aad ku shaqeyneyso ayaa la dhigay. Waa hab aad u firfircoon, oo ku dhex jira habka cilmi baarista iyo dukumeentiyada, taas oo ay tahay in la sameeyo ka hor marxaladda naqshadeynta.
Sida aan horay u soo sheegnay, tallaabada ugu horreysa ka hor inta aan la bilaabin curinta moodboard-ka waa fikrad cad ka hayso waxa aad rabto inaad ku gaadho astaanta aad la shaqaynayso, oo leh fikrad aasaasi ah raadinta canaasiirta waxay noqon doontaa mid diirada saara.
Dhinac kale oo xooga saaraya waa taas Wax kasta oo lagu daro moodboard-ka uma muuqdaan naqshadda kama dambaysta ah. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad dooratay 3 midab, maaha inay muuqdaan dhammaan, waxay ku siinayaan hagaha palette ee ugu fiican ee ku habboon shakhsiyadda astaanta.
Tusaalooyinka Guddiga niyadda ugu Fiican
Sida aynu hore u soo sheegnay, farsamada moodboard waxay kuu ogolaanaysaa inaad kala soo baxdo fikradaha ay sumaduhu ku siiso macaamiisha, ama dhiirigelin shakhsi ahaaneed oo kaliya. Waa kuwan dhowr tusaale oo kala duwan si ay ku siiyaan xoogaa dhiirigelin ah.
guddiga niyadda design gudaha
Ma aha inaan noqono xirfadlayaal xagga garaafyada ama naqshadeynta gudaha si aan ugu awoodno inaan ku shaqeyno farsamadan, Isticmaale kastaa wuu samayn karaa marka ay raadinayaan dhiirigelinta mashruuca, ha ahaato dib u habeynta qolka, abuurista shaqo ama xitaa isbeddel muuqaal ah.
Qaybtan, naqshadeynta moodada gudaha Waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan ee aan ku ilaalin karno, iyaga oo ka muuqda walxaha la xidhiidha qurxinta, textures, midabada, alaabta guriga, iwm.. Kaliya waa inaad soo ururisaa sawirro nagu xiisaya oo ku habboon fikradahayaga.
Moodborad iyo fashion waa laba walxood oo wada socda, waa a Qalabka lagama maarmaanka u ah qaybtan marka la diyaarinayo ururinta. Naqshadayaasha iyo kooxdooda ayaa mas'uul ka ah abuurista isku-dhafka iyaga oo isu keenaya sawirro kala duwan, dhar iyo midabyo muujinaya dhiirigelinta madxafyada dharka. Habkan sawir-qaadista waxay kaa caawinaysaa in la siiyo nolosha qaybaha, si loo ogaado sida ay u eegi karaan ka hor inta aan la samayn.
Sida aynu sheegnay, walxaha ka muuqda fikradda moodooyinka moodada moodada waa dhar, textures, midabyo, dhammayn, sawiro labada dhar iyo moodooyinka, sawiro, dhiirigelinta qurxinta, iwm.
Moodboard ee xayeysiinta iyo naqshadeynta
Dhanka xayaysiinta iyo qaybta fanka garaafyada, Farsamadani waa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee la qaado, tan iyo iyada oo loo marayo dhammaan macluumaadka ay macaamiishu siiyeen kooxda naqshadaynta. ku saabsan sida ay yihiin, waxay yihiin iyo waxay rabaan inay gudbiyaan.
Waa a farsamo hal abuur muuqaal heer sare ah oo gacan ka geysanaya in fikradda hoos loo dhigo dhulka, iyada oo loo mahadcelinayo qaybaha kala duwan ee ka kooban. Waxay kaa caawinaysaa inaad tusto macaamiisha qaab muuqaal iyo muuqaal ah, halka shaqada, fikradda, ay aadi doonto. Moodhku waa barta bilawga ah ee fikradda iyo waxa u horseedi doona naqshadda ugu dambeysa.
Abuuritaanka guddiga niyadda waxay qaadan doontaa waqti, laakiin waxaad awoodi doontaa inaad dhisto hage muuqaal ah kaas oo kaa caawin doona inaad calaamadiso fikradda oo aad aragto sida natiijada kama dambaysta ahi noqon doonto.. Waa habka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan ee lagu muujiyo qaab muuqaal ah, si muuqaal ah loola xiriiro macaamiisha, iyada oo la kaashanayo ururintan walxaha waxaad muujin kartaa jihada uu mashruucu u socdo.
Marka la bilaabayo mashruuca, waxyaabaha ugu horreeya waa dhammaan erayada, waraaqaha iyo fikradaha, kuwaas oo xitaa noqon kara jahawareer. Waad ku mahadsan tahay moodboard-ka, waxaad ka heli kartaa fikradaha ka soo baxa gudbinta warbixinta oo kuu ogolaanaya inaad sawirto fikradaha laga wada hadlay, oo leh qaab garaaf ah.
Qalabka dhijitaalka ah si loo sameeyo guddi niyadda
Waxaa jira xulashooyin badan si loo abuuro looxyada niyadda, laga bilaabo habka gacanta, jarista joornaalada, wargeysyada, agabka iyo kuwa kale, ilaa qalab lagu sameeyo si dhijitaal ah.
Illustrator ama Photoshop waa mid ka mid ah barnaamijyada naqshadaynta ee aadka loo isticmaalo ee naqshadaynta moodboard-ka. Waxaad si xor ah u habayn kartaa sawirro, dooran kartaa cabbirro, ku qori kartaa fikradaha muhiimka ah meel kasta, ku dar midabyo kala duwan, iwm.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa jecel Pinterest, waa mid ka mid ah meelaha aad ka heli karto tixraacyo badan, marka laga reebo bangiyada sawirka. Kaliya waa inaad abuurtaa guddi, oo bilaw inaad kaydiso dhammaan sawirada ku jira, labadaba Pinterest iyo boggaga internetka ee kale.
Niice ama Moodboard Lite, waa laba goobood oo si gaar ah loo sameeyay si fudud loo abuuro moodboard. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda Dragdis, koontada ku taal goobtan waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad jiiddo oo aad tuurto dhammaan walxaha kugu dhiirigeliya.
Sida aad u jeeddo, Waxaa jira siyaabo badan oo loo abuuro guddiga niyadda, kaliya waa inaad doorataa habka aad ugu qanacsan tahay. Waxaa jira kuwa doorbidaya wax kasta oo dhijitaalka ah, iyo kuwa kale oo doorbidaya inay jidh ahaan u haystaan ​​oo ay awoodaan inay ciyaaraan.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso fikradaha muuqaalka si dhakhso ah, farsamada moodboard-ka ayaa ah mid, maadaama ay wax badan qabato ka fudud oo xiiso badan dhammaan habka cilmi-baarista iyo raadinta tixraacyada.
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad bilowdo inaad isku daydo, gooyso, jeexjeexdo, koojiso... waxaa hubaal ah inaad heli doonto dhinacaaga hal-abuurka leh markaad madadaalo leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tusaalooyinka moodboard-ka si ay kuu dhiirigeliyaan